Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : 2013
Labels: Ankur, gopi krishna dhungana
Upatyaka ma congress
अन्तर्मनका यात्रीको अवसान
- गोपीकृष्ण ढुंगाना/मनोज श्रेष्ठ
काठमाडौं : ‘म आफ्नो जीवन-धर्कोको डोरीका पोयाहरू फुकाउँदैछु। पोयाका बाबियाहरू फुकाउँदैछु। बाबियाका त्यान्द्राहरू केलाउँदैछु। सेक्सपियरले ‘द अब्जेक्ट अफ आर्ट इज टु गिभ लाइफ अ सेप’ भनेझैं कलाको उद्देश्य जीवनलाई आकार दिनु हो भने यहाँ म आफ्नो जीवन-धर्कोको आकार कुँद्दै छु।’
‘अन्तर्मनको यात्रा’ मा यस्ता पंक्ति लेख्ने लेखक जगदीश घिमिरे अब हामीबीच रहेनन्। ‘बाँच्नु अल्पकालीन समाधान हो, मर्नु दीर्घकालीन’ भन्दै जगदीशले ६८ वर्षको उमेरमा बिहीबार दीर्घकालीन बाटो रोजे। छोरी जूनले जाउलो खुवाउन खोज्दा चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा उपचार गराइरहेका लेखक तथा साहित्यकार जगदीश घिमिरेले दही खाने इच्छा गरेका रहेछन्। अचेत हुनुअघि जगदीशले छोरा हिमालसँग दही मगाएर खाँदै गरेको अवस्थामा छोरीले जाउलो खुवाउन खोजेकी रहिछन्।
‘मुख बिग्रन्छ, अहिले म दही नै खान्छु, जाउलो खान्नँ’, बुवाले बिहीबार बिहान लगभग साढे ३ बजे भनेको सम्झिँदै हिमाल भन्छन्, ‘बुवाको यो शब्द नै अन्तिम हो। र, उहाँले खाएको वा पिएको ठोस पदार्थ पनि दही नै हो। त्यसपछि एक घन्टा अचेत हुनुभयो। बिहान ५ बजेर ५५ मिनेमा जाँदा उहाँको सास गयो।’
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन प्रशासनले लगाएको कफ्र्युकै दिन लेखक तथा साहित्यकार जगदीश घिमिरेले आफूलाई ब्लड क्यान्सर लागेको पत्तो पाए। त्यो बेला उनी अमेरिकामा थिए।
विसं २००२ चैतमा मन्थली रामेछापमा जन्मिएका घिमिरेका एक छोरा र एक छोरी छन्। उनलाई एक महिनादेखि चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा राखिएको थियो। सामान्यजस्तै गरी उनलाई अस्पतालमा उपचार गराइराखिएको थियो।
छोरा हिमालका अनुसार निधन हुनुअघि एक घन्टामात्रै उहाँ अचेत हुनुभयो। ‘अस्पतालमै रहँदा कोको आए, केके भनेजस्ता कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो’, अस्पतालको शय्यामा भएका जगदीशले भनेका कुरा सम्झिँदै हिमालले भने, ‘उहाँ कहिल्यै हार्नुभएन, सधैं लडिरहनुभयो। यो समाज र आफ्नै मृत्युसँग।’
बिहीबार बिहान त्यस्तै साढे ६ बजे शव अस्पतालबाट सीधै पशुपति आर्यघाटमा पुर्‍याइएको थियो। करिब साढे तीन घन्टा श्रद्धाञ्जलिका लागि राखेपछि मध्याह्न १२ बजे छोरा हिमालले दागबत्ती दिएका थिए।
पत्‍नी दुर्गा घिमिरेका अनुसार जगदीशलाई अस्पतालमा ३४ दिन राखियो। चोभारनिवासी उनले भनिन्, ‘पाँच दिनदेखि चिकित्सकले कसैलाई भेट्न दिएका थिएनन्।’
जगदीशलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन दर्जनौं साहित्यकार र सयौं शुभचिन्तक आर्यघाट पुगेका थिए। वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसले प्रस्ट वक्ता र प्रखर लेखकको निधन भएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जगदीश जे लेख्थे त्यो बाँच्थे, जे बोल्थे त्यो गर्थे। आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने उनको द्वैध चरित्र थिएन।’ सरकारले सिर्जनाभन्दा स्रष्टालाई महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। भने, ‘यहाँ बाँचुन्जेल कसैले केही गर्दैन, मरेपछि गोहीको आँसु चुहाउने प्रवृत्ति जीवितै छ।’
‘दयाको पात्र हुनुभन्दा ईष्र्याको पात्र हुनु बेस’, आफ्नो ईष्र्या गर्नेहरूबीच कुरा चल्दा यही अंग्रेजी आहान जगदीशले ‘अन्तर्मनको यात्रा’ मा लेखेका छन्। जगदीश जति बाँचे ईष्र्यालाग्दो लेखे र काम गरे। समकालीन ज्ञानुवाकर पौडेल भन्छन्, ‘उनले जन्मथलो रामेछापको मन्थलीमा २०३९ सालमा तामाकोसी सेवा समिति स्थापना गरेर अस्पताल, त्यसपछि बैंक स्थापना गरे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उनले सरकारले नगरिरहेको काम प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्‍याएर मन्थलीवासीलाई गुन लगाए।’
जगदीशको पहिलो साहित्यिक अन्तर्वार्ता लिएर ‘रचना’ मा छाप्ने पौडेलले जगदीशलाई उपमा दिँदै भने, ‘जगदीश घिमिरे साहित्यिक सेलिब्रेटी हुन्, रोल मोडल हुन्।’
‘अन्तर्मनको यात्रा’ २०६४ ले चिनिएका उनले सोही कृतिका लागि मदन पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार र मैनाली कथा पुरस्कारसमेत पाएका थिए। २०२७ सालमा ‘लिलाम’ उपन्यास लेखेका उनले ‘साबिती’, ‘सन्तान’, ‘बर्दी’, ‘अग्निसूत्र’ हुँदै अन्तिम कृतिका रूपमा २०६९ सालमा ‘सकस’ लेखेका थिए।
‘साहित्य सत्यको अनुसन्धान हो, राजनीति झूठको खेती। साहित्यको वाहन चन्दनजस्तो सुवासित विवेक हो, राजनीतिको वाहन श्रीखण्डकै भए पनि दाउराको सैद्धान्तिक भारी बोक्ने विवेकशून्य गधा हो’, साहित्यप्रति यस्तो धारणा बनाएका जगदीशले उपन्यास, नाटक, कथा, कविता आदि विधामा कलम चलाएका थिए।
साहित्यकार ध्रुवचन्द गौतमले भने, ‘साहित्यमा अन्तर्मनको यात्रा र सकस कालजयी कृति बने। मलाई त उनको कथाकारिता पनि उत्कृष्ट लाग्छ। नाटक सन्तान र उपन्यास साबिति अत्यन्तै मन परेको कृति हो।’
उपचारका क्रममा चिकित्सकले ‘माइलोमा’ पीडितको औसत आयु तीनचार वर्ष हुन्छ भनेका थिए। तर, जगदीश मृत्युलाई औंला उठाउँदै आत्मविश्वास र औषधिले साढे सात वर्ष बाँचे। उपचारका क्रममा लेखिएको अन्तर्मनको यात्रामा वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितले भूमिका लेखेका थिए, ‘जीवनयात्राको कारूणिक तथा कलात्मक अभिलेख… प्रत्येक स्वाभिमानीले यो पुस्तकमा आफू चित्रित भएको पाउनेछ।’
माइला दाजु नगेन्द्र शर्माले साइँलो भाइ जगदीशकै इच्छाअनुरूप प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा श्रद्धाञ्जलिका लागि नराखिएको बताए। भने, ‘ऊलगायतको हाम्रो एउटा समूहले प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान रहेन, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बन्यो भनेर केही वर्षदेखि प्रतिष्ठानका औपचारिक कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका थियौं।’ उनका अनुसार जगदीशले राजनीतिक टिप्पणीहरूको संग्रह ‘चेतना भया’ र लेख र अन्तर्वार्ताहरूको संग्रह ‘छ्यासमिस’ प्रकाशनका लागि कृतिका रूपमा तयार पारेका थिए।
विसं २०२७ मा नेपालगन्ज आएको समयदेखि चिनजान र घनिष्ठ भएको बताउने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव सनत रेग्मीले भने, ‘उहाँ इच्छुक नभपपछि कर गरेनौं। उहाँको व्यक्ति त्व पनि यस्तो सम्मान नखोज्ने पृथक् थियो।’
Labels: गोपीकृष्ण ढुंगाना, जगदीश घिमिरे, तुलसी दिवस
‘नटिप्‍नू हेर कोपिला
नच्यात्‍नू पाप लाग्दछ…।’
कक्षा ४ मा पढ्दा गीता त्रिपाठीलाई पहिलोपटक यही पंक्ति कण्ठस्थ थियो। स्कुलमा सस्वर घोकेर आएको त्यो कविताको मर्म त्यस बेला नै उनले व्यवहारमा उतार्थिन्। ‘जब म आँगनको डिलमा ढपक्‍क भएर फुलेका अनेक जातका सुन्दर फूलहरूका थुंगा छुन डराउँथेँ’, उनी बाल्यकाल स्मरण गर्छिन्, ‘त्यो कविता पढेपछि हामीले केटाकेटी खेलमा देउताको मन्दिर बनाएर फूल च्यात्दै चढाउने क्रम बन्द गर्‍यौं। हाम्रो बालमस्तिष्कले फूललाई फूलैमात्र त देख्न सक्यो त्यति बेला।’
देवकोटाको श्लोकले प्रथम
गीता निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकीले पनि आमा र अग्रजहरूबाट जीवनमा कयौं पटक सुनिसकेको देवकोटाको अर्को कवितांश हो, ‘हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले…।’ भन्छिन्, ‘यो श्लोक त जनजनको मुखमा थियो, यसलाई सुन्न स्कुल जानु वा किताबै पल्टाउनु पर्दैनथ्यो।’ पछि पद्मकन्या क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्दा डा. वानीरा गिरीले यही श्लोकको व्याख्या गर्न दिनुभयो। स्वतन्त्र सिर्जनात्मक व्याख्याका लागि दिइएको कक्षा परीक्षामा पचास पूर्णांकमा पैंतालीस अंक पाएर प्रथम भएको प्रसंग उनी अझै बिर्सन्नन्। थप्छिन्, ‘वर्षौंपछि स्मृतिमा तरंगित हुँदा पैंतालीस नम्बर पाएर प्रथम भएको प्रसंग अझै मीठो लागिरहन्छ।’
२०५२ सालमा देवकोटाकै जन्म सहर काठमाडौंमा घर बनाएपछि उनले घरको भित्तामा महाकविको एउटा तस्बिर झुन्ड्याएकी थिइन्। घरप्रवेशको साइत पनि त्यही तस्बिरलाई मानेकी थिइन् गीताले। ‘निराकार अविदितको यात्रामा निक्लेका उनी अद्यापि त्यो तस्बिर हुँदै मेरो अजस्र आदरमा उसरी नै जाग्रत भइरहेको पाउँछु’, गीता भन्छिन्, ‘केही वर्षदेखि विद्यार्थीका लागि उनका निश्चित कविता र निबन्धका व्याख्याता भएकी छु।’ प्रकृति र जीवनबीचको मिहिन सम्बन्ध बुझ्न देवकोटाले सिकाएको उनी ताउँछिन्। थप्छिन्, ‘देवकोटाले मात्र यो सम्बन्ध अनुभूत गर्न सकेको पाउँछु, सायद त्यो उनकै स्वीकारोक्तिको छैटौं इन्द्रियका कारणले सम्भव भएको हो।’
नयाँ पुस्तालाई खुराक
नयाँ पुस्तासँग साक्षात्कार गरिरहन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका छोरा पद्मप्रसाद देवकोटालगायतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र खोलेका छन्। केन्द्रले देवकोटासम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम, सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत र छलफल गर्दै आएको छ। यसका साथै देवकोटाका कृतिलाई अन्य भाषामा अनुवाद गर्छ र अप्रकाशित उनका पाण्डुलिपिलाई कृतिको रूप दिन्छ। केन्द्रका पूर्वसचिव केशव सिग्देलका अनुसार केन्द्रले देवकोटासम्बन्धी विभिन्न विषयमा वर्षमा चारवटा जर्नल प्रकाशन गर्छ; जुन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा हुन्छ। केशव भन्छन्, ‘यी सबै गतिविधिले नयाँ पुस्तालाई महाकवि देवकोटाका बारेमा बुझ्न प्रशस्तै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।’
सिग्देलका अनुसार केन्द्रले देवकोटाका बारेमा शोध गर्ने वा अन्य केही अनुसन्धान गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विद्वत्‌वृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। उनी नयाँ पुस्तालाई देवकोटा महान्, ठूला र राम्रा साहित्यकारमात्र भनिएको तर त्यसबारेको कारण प्रस्ट रूपमा नदिइएको गुनासो गर्छन्। देवकोटालाई थप प्रचारप्रसार गर्न केन्द्रमा आबद्ध हुन पाउँदा अत्यन्तै गर्व लागेको बताउने उनी थप्छन्, ‘विश्वस्तरका यी नेपाली साहित्यकारका बारेमा अझै पनि नयाँ पुस्ता अनभिज्ञ छ। केन्द्रमात्र होइन, सम्बन्धित सबैले उनका बारेमा सक्दो जानकारी दिलाउनुपर्छ।’
चलचित्र निर्देशक यादव खरेलले देवकोटालाई नयाँ पुस्तामा लैजान स्वयंसेवक बनेर ठूलै मेहनत गरे। ६ वर्षअघिको प्रसंग हो, खरेलले ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा’ नामको ठूलो पर्दाको वृत्तचित्र बनाए। डिल्लीबजारस्थित प्रांगणमा देवकोटाको मूर्ति राख्‍ने नेपाल सांस्कृतिक संघले लगानी गरेको उक्त वृत्तचित्रले नयाँ पुस्तालाई धेरै ज्ञान दिने उनी बताउँछन्। खरेल भन्छन्, ‘जीवनीमा महाकविका धेरै कुरा आएका छन् तर जति प्रदर्शन गरिनुपर्थ्यो यति नभएकै कारण युवा पुस्ता देवकोटाबारे अनभिज्ञ छन्। केही बुझेकाले पनि गहन ढंगले देवकोटालाई बुझ्न पाएका छैनन्।’
उनले त्यही वृत्तचित्रलाई आलेखका रूपमा कृतिको स्वरूप पनि दिएका छन्। वृत्तचित्र ९० मिनेटको छ। वृत्तचित्रमा उनले प्रज्ञाप्रतिष्ठान र बालसाहित्यका बारेमा देवकोटाको योगदानबारे राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको र साहित्यिक काव्ययात्राका बारेमा इन्द्रबहादुर राईको अन्तर्वार्ता समावेश गराएका छन्।
देवकोटा राजनीतिमा लागेको घटना थोरै साहित्यकारलाई थाहा होला। खरेल भन्छन्, ‘देवकोटालाई केदारमान व्यथितले दार्जिलिङ र बनारस लिएर गएको र त्यस बेला नेपाली कांग्रेसको मुखपत्रको उनले सम्पादन गरेको विषय पनि वृत्तचित्रमा समावेश गरेको छु।’ देवकोटाका विविध आयाममाथि वृत्तचित्र बनाउन पाउनु गर्वको कुरो भएको उनको भनाइ छ। २०१६ सालमा मृत्यु भएका देवकोटासम्बन्धी दृश्य र श्रव्य कुरा वृत्तचित्रमा समेट्न नपाउँदा भने खरेल दु:खी छन्। थप्छन्, ‘नयाँ पुस्तालाई अत्यन्तै ऊर्जा र प्रेरणाका स्रोत देवकोटाको एउटा वाक्यमात्र श्रव्य राख्न पाइयो। त्यो पनि उपचाररत डाक्टरले अन्तिम अवस्थामा देवकोटाले विष खान देऊ भनेको वाक्य रेकर्ड गराएका रहेछन्।’ देवकोटालाई बुझ्न वृत्तचित्र र उक्त पुस्तक धेरै हदसम्म सहयोगी हुने भए पनि प्रचारको अभाव देखिएको उनको गुनासो छ।
शोधमा देवकोटाका सिर्जना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत प्राध्यापक डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले आफ्नो विद्यावारिधिका क्रममा देवकोटाको ‘मुनामदन’ लाई रोजे। ‘कविताको संरचनात्मक विश्लेषण’ विषयमा २०५८ सालमा विद्यावारिधि गर्ने क्रममा कविताको तीन थरी संरचना रोज्नुपर्‍यो। लुइँटेल भन्छन्, ‘तीनमध्ये आख्यानात्मक संरचनामा देवकोटाको मुनामदनलाई रोजेको थिएँ। यसले मेरो विद्यावारिधिको विषयलाई पनि गम्भीर र ओजपूर्ण बनाएको थियो।’ स्नातकोत्तर तहको प्रथम वर्षमा देवकोटाका फुटकर नेपाली कविता र द्वितीय वर्षमा मुनामदन खण्डकाव्य र शाकुन्तल महाकाव्य अध्ययन गर्नुपर्छ।
साथै दोस्रो वर्षको ऐच्छिक अध्ययनमा देवकोटाको विशेष अध्ययन रोज्न सकिन्छ। देवकोटाका कृतिका विषयमा शोधपत्र लेख्ने केही विद्यार्थीको शोधनिर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका लुइँटेल भन्छन्, ‘गहन अध्ययन गर्ने र देवकोटालाई बुझेकाले मात्र उनका कृतिमा शोध गर्छन्। नत्र अन्य हल्काफुल्का विषयमा शोध गर्न रुचाउँछन् अहिलेका विद्यार्थी।’
देवकोटाको साहित्यिक लेखन अतिसामान्यदेखि अतिस्तरीयसम्म रहेको अहिलेका लेखक, साहित्यकार र प्राध्यापकहरूको टिप्पणी छ। लुइँटेल भन्छन्, ‘गम्भीर र स्तरीयमा धेरै गम्भीर र अति स्तरीय लेखन पनि छ देवकोटाको। तर, देवकोटाको भन्दैमा सबै भव्य र राम्रो भन्ने होइन।’ देवकोटाको लेखनलाई नयाँ पुस्ताले उनको चिन्तन र दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ। उसो त यसअघिका केही अध्येताले पनि देवकोटाबारे गहन अध्ययन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। उनका अनुसार देवकोटाका ‘मुनामदन’ र ‘पहाडी पुकार’ जस्ता केही रचनाबाट युवा पुस्ताले सकारात्मक पक्षहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्छन्। उनी थप्छन्, ‘त्यतिमात्र होइन, अहिलेका सबै लेखकले देवकोटाबाट उनको सिर्जनात्मक निरन्तरता अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी ठान्छु।’
पागलले बनाएको पागल
म देशलाई देख्दछु
बास्नालाई स्वाद लिन्छु…’
देवकोटाका धेरै कवितामध्ये चर्चित एउटा कविता हो, पागल। युवापुस्ताका हालका साहित्यकार विप्लव ढकाल पनि कवितामा जमेका कवि हुन्। उनलाई पागल कविताले धेरै प्रभाव पारेको छ। भन्छन्, ‘म पागल कविता जतिपटक पढ्छु त्यतिपटक नै मलाई नयाँ सोच जन्मन्छ। त्यो झंकारबाट मेरो नयाँ कविता जन्मन्छ।’ उनी पागल कवितालाई युगयुगसम्म पनि मीठो झंकार दिइरहने दाबी गर्छन्। उनले पागल कवितालाई सबैभन्दा बढी पढे। देवकोटाका धेरै सिर्जनामध्ये अत्यन्तै सुन्दर लाग्‍ने पागल कविताबारे उनी भन्छन्, ‘पागल कविता देवकोटाको लिजेन्ड कविता हो। त्यसो त उनका लेखनका विविध विधामध्ये मलाई कविता र निबन्ध विशेष लाग्छन्।’
देवकोटाका सिर्जना जसले पढ्छन्, त्यो बौद्धिकताले भरिएको हुने ढकालको भनाइ छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा नेपाली विषय अध्यापनरत उनी भन्छन्, ‘देवकोटाका खास सिर्जना मज्जाले बुझ्न मस्तिष्कको कसरत निकै सशक्त ढंगले गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसैले पनि विद्यार्थी अर्थात् नयाँ पुस्ताका सबैले नरुचाउन सक्छन्। तर, जसले उनलाई पढिरहेछन् तिनले इन्ज्वेय गरिरहेको पाएको छु।’ साहित्यिक लेखनमा विविधता छर्नसक्‍नु देवकोटाको विशेषता भएको ढकालको भनाइ छ।
देवकोटाले सबै विधामा हात चलाएको उल्लेख गर्दै उनी नयाँ पुस्तालाई पनि क्षमताअनुसार सबै विधामा लेख्न प्रेरित गरेको बताउँछन्। देवकोटाको लेखनमा पद्धतिवाद स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ। खासगरी कवितामा लघुत्तम रूपदेखि बृहत्तर रूपसम्मको लेखन गर्ने देवकोटाका कृतिमा संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै अवस्था रहेकाले यसबाट पनि युवा पुस्ताले केही सिक्‍नुपर्ने उनको जोड छ। थप्छन्, ‘युवा साहित्यकारले देवकोटाको विविधताबाट धेरै सिक्‍न सक्छ।’
पागल थिएनन् देवकोटा
एउटा समय आयो। जति बेला देवकोटा चरम आर्थिक समस्यामा थिए। उनले आफ्ना अनेक इच्छा आकांक्षा मार्नुपर्‍यो। उनी नैराश्य र लघुताभासले किचिए। त्यसको केही वर्षपछि १९९५ सालमा काइँला भाइ मधुसूदनले भारतको राँची नर्सिङ होममा पुर्‍याए। प्राध्यापक डा. कुमारबहादुर जोशी भन्छन्, ‘त्यस बेला असामान्य क्षमताका मनोचिकित्सक डा. वर्कले हिलले देवकोटाका बारेमा भनेका थिए, देवकोटा पश्चिममा जन्मिनुपर्ने मानिस रहेछन्। जियोग्राफिकल मिस्टेकले पूर्वमा जन्मिन पुगेछन्। पश्चिमी देशमा भए यिनको ठूलो सम्मान र कदर हुने थियो।’
देवकोटा अरूका लागि करिब पाँच महिना उपचार गर्न राँची बसिदिएको जोशी बताउँछन्। भन्छन्, ‘देवकोटाले आफू पागल नभएको पुष्टि गर्न पागल कविता लेखेका थिए। कविताले सबै प्रस्ट पारेको छ। अरू मानिस भए पागल भइसक्थे तर असामान्य क्षमताका धनी भएरै देवकोटाले त्यो आरोपलाई चिरेर आफूलाई उत्कृष्ट र कालजयी साहित्यकार प्रमाणित गरे।’ देवकोटालाई विश्वपरिवेशमा मूल्यांकन गर्ने अर्को आधार पनि रहेको जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार राहुल सांकृत्यायनले भनेका थिए, ‘देवकोटा भारतका जयशंकरप्रसाद, सुचित्रानन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ को हाराहारीका कवि हुन्।’ राहुलको उक्त भनाइ सन् १९५३ मेमा प्रकाशित आजकल कविता अंकको पूर्णांक ५८ मा ‘नेपाल के महाकवि देवकोटा’ मा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा देवकोटाको भाषण
रसियाको तासकन्दमा अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलन भयो। पत्नी मनदेवीसहित २०१५ सालमा रसिया पुगेका देवकोटाले एउटा साहित्यिक भाषण दिए। सम्मेलनमा २० राष्ट्रका प्रतिनिधि थिए। देवकोटा भने तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमी (हालको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान) बाट प्रतिनिधित्व गरेर पुगेका थिए। सम्मेलनमा आआफ्नो देशमा विदेशी उपनिवेशवादविरुद्ध चलिरहेको मुक्तिसंग्रामको समर्थनमा आवाज घन्किरहेको थियो। जोशी भन्छन्, ‘त्यो भाषणमा देवकोटाको भाषण सबैभन्दा आकर्षक थियो। सम्मेलनले घोषणापत्र नै बनायो त्यो भाषणलाई।’
देवकोटाले पहिलोपटक विश्वस्तरमा नेपाली साहित्य र साहित्यकारको प्रतिनिधित्व गरेको उनको भनाइ छ। देवकोटाले उक्त भाषण नेपालमै अंग्रेजी भाषामा तयार पारेको उनको भनाइ छ। तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, देवकोटालाई उक्त भाषणले नौ महिनाको तलब रोकिदियो। जोशी भन्छन्, ‘एकेडेमीले देवकोटालाई कम्युनिस्ट भनी आरोप लगायो। साथै एकेडेमीको अनुमति नलिई सम्मेलनमा गएको पनि भन्यो र त्यसबापत नौ महिनाको तलब रोकेको थियो।’
Labels: इन्द्रबहादुर राई, कुमारबहादुर जोशी, खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेल, यादव खरेल
आर्यघाटमा पनि देवकोटाको मुखमा चुरोट
आजको विशेष http://annapost.com/special/news10468
प्रस्तुति : गोपीकृष्ण ढुंगाना
दरबार हाइस्कुल पढिसक्दासम्म साहित्यमा कुनै चासो थिएन ममा। शिक्षकले पनि राम्रो व्याख्या गर्दैनथे। त्यसैले पनि साहित्यको रसास्वादन हुन पाएन। कोर्स बुकमा भएका कुरा घोकन्ते विद्यामात्र भयो। त्यसैले जसरी पनि पास हुनेमात्र ध्याउन्न थियो। क्याम्पसका लागि १९९८ सालमा त्रिचन्द्रमा आईए पढ्न भर्ना भएँ। त्रिचन्द्र बिहारस्थित पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेकाले परीक्षा लिन पनि उतैबाट आउँथे, परिणाम पनि उतैबाट पठाउँथे। त्यो बेला राजधानीमा पाँचतारे त के एकतारे होटलसम्म थिएन। त्रिपुरेश्वरको अहिलेको वल्र्ड टे्रड सेन्टर भएको ठाउँमा सरकारी गेस्ट हाउस थियो, ती पाहुनालाई त्यहीँ राखिन्थ्यो। आउनजान बग्गीको व्यवस्था गरिएको थियो।
आईएमा संस्कृत, अर्थशास्त्र र इतिहास लिएको थिएँ। इतिहासमा बेलायत र ब्रिटिस इन्डियाबारे पढाइ हुन्थ्यो। स्कुलमा नभएकाले पहिलोपटक अर्थशास्त्र विषय थाहा पाएको थिएँ। संस्कृतमा कालीदास, रघुवंश र भर्तृहरिको पढ्नुपथ्र्यो। कालीदास र रघुवंश पढ्दा साहित्यको चर्चा हुन्थ्यो। जहाँ छन्द र ह्रस्वदीर्घबारे बुझेँ। पुस्तकमा विस्तृत कुरा दिएकाले मजैले पढियो। संस्कृत साहित्यका धेरै गतिविधि थाहा भयो।
यसै मेसोमा वसन्त, फूल, खरायो र सिंहजस्ता विषयमा छन्दमा बालकविता लेखेँ। गोरखापत्र र शारदामा छापियो। क्याम्पसमा लिजर टाइम धेरै हुन्थ्यो। त्यो बेला घुम्न जाने अहिलेजस्तो चलन थिएन। घन्टाघरको पछाडिपट्टि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको कार्यालय थियो। बालकृष्ण सम अध्यक्ष थिए, त्यहाँ पस्ने कुरै हुन्थेन। क्याम्पसका साइन्स ब्लक बन्दै थियो। त्यसको तेस्रो तलामा तीनवटा कोठा थिए; जहाँ भाषा अनुवाद परिषद्को कार्यालय थियो। एउटामा पुष्करशमशेर, अर्को कोठामा (हालका राष्ट्रकवि) माधव घिमिरे र बद्रीनाथ भट्टराई र अर्को कोठामा (पछि महाकवि बनेका) लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा थिए।
कक्षा नभएका बेला हामी परिषद्को कार्यालयतिर पुगेका थियौं। देवकोटा कोठामा वरपर र बाहिरभित्र गर्दै थिए। उनले ‘को हो?’ भने। हामीले ‘विद्यार्थी’ भन्यौं। उनले बस भने। त्यहीँ चिनजान भयो। त्यसअघि मलाई उनीबारे थाहै थिएन। छन्दबारे कुरा भएपछि रस पसिसकेको मलाई सकसक भयो। मैले फ्याट्टै ‘म पनि कविता लेख्छु’ भनिहालेँ। ‘सुनाऊ त’ भने। मौकामा मैले पनि सुनाइहालेँ। सुनिसकेपछि देवकोटा निकै खुसी भए, मलाई ठूलै हौसला भयो। उनलाई पनि झोक चलेछ। ल लेख भन्दै कोठामा वरपर गर्दै सिंह र खरायोको विषयमा भने। मैले लेखेँ। त्यो बेला थाहा पाएँ- देवकोटामा कत्रो बुद्धि, ज्ञान र क्षमता?
कपडाको थैलीमा पैसा
त्यति बेला कागजको नोट निस्किएको थिएन। म क्याम्पसबाट फर्किंदै थिएँ। देवकोटा कपडाको थैलीमा एकदमै गह्रुँगो हुने गरी चाँदीका सिक्का बोकेर आउँदै गरेको भेटेँ। लाग्यो, ‘कुनै व्यक्ति वा पियनलाई बोकाएर लगे भइहाल्थ्यो नि, के दु:ख गरेको यस्तो।’ परिषद्मा भेट्दा ‘शाकुन्तल’ लेखेका थिए। सायद त्यसकै पारिश्रमिक पाएको खुसियाली हुनुपर्छ।
उनको अनुहारमा कति भव्य हर्ष थियो भने ममा समेत उमंग जागेको थियो। उनी मुखमा चुरोट च्यापेर पैसाको भारीसँगै बागबजारबाट डिल्लीबजारतिर मोडिए। एक मनले भन्यो, ‘त्यो पैसा बोकेर घर पुर्‍याइदिऊँ। तर फेरि आफू जानुपर्ने पाटन। किताबको भारी छँदैथियो आफूसँग।’ पैसा पाए पनि चुरोट, मासु आदिको तिर्दा घर पुग्दैनथ्यो भनेको सुनेको थिएँ, खै त्यो दिन के गरे। पछि घर पत्ता लगाएर पुगेँ। घरमा उनी कोठा होइन, चोटामा भेट दिन्थे। गुन्द्री ओछ्याएका हुन्थे। त्यहीँ बसेर साहित्यिक कुराकानी गरेँ। त्यो बेला धेरै प्रेरणा मिलेको थियो।
मन्त्रालय थाहै रहेनछ
डा. केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाको प्रसंग हो। देवकोटालाई शिक्षामन्त्री घोषणा गरियो। भोलिपल्ट बिहानै देवकोटाको घर पुगेँ, बधाई दिन। ड्राइभर गाडी लिएर पुगेको रहेछ तर देवकोटालाई सिंहदरबारभित्र शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ भन्ने नै थाहा रहेनछ। एकैछिनमा उनका छोरीज्वाइँ साइकलमा आइपुगे। अहिलेजस्तो नभएकाले सितिमिति कुन कार्यालय कता भनेर सिंहदरबारमा पत्तो पाइन्नथ्यो। मैले त्यसो भए म पुर्‍याइदिन्छु भनेर लगेँ। साथमा उनका ज्वाइँ पनि गए।
आर्यघाटमा पनि चुरोट
लोकसंस्कृतिका विषयमा लेख लेख्थेँ। कुनै बेला देखाएको लेख देवकोटाकै घरमा रहेछ। देवकोटाको निधनपछि उनका छोरा पदमले कागजात मिलाउने क्रममा मेरो नामको लेख भेटेछन्। मधुपर्कमा सोधेर दिएछन्। पछि पारिश्रमिकका लागि बोलाउँदा पो थाहा पाएँ, कसरी लेख छापियो भनेर। त्यसभन्दा केहीअघि देवकोटालाई क्यान्सर भएको र रोगले च्यापेको सुनेपछि शान्तभवनस्थित मिसनरी अस्पताल पुगेको थिएँ। अन्तिम समय भयो भनेर आर्यघाट पुर्‍याएपछि पनि हेर्न गएको थिएँ।
अन्तिम अवस्थामा आर्यघाट राखिने भएकाले हेर्न पुग्दा गालाका मासु सबै टाँसिएको थियो। मुहार अँगारजस्तै कालो थियो। तर, देवकोटाचाहिँ मुखमा चुरोट च्यापेर धुवाँ उडाइरहेका थिए। डाक्टरले पनि अन्तिम भएपछि इच्छा लागेको गर्नू भनेका रहेछन्।
Labels: केआई सिंह, गोपीकृष्ण ढुंगाना, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सत्यमोहन जोशी
Labels: Ankur, Balkatha, gopi krishna dhungana, Sani Juli
Sahid n Party Bhawan
Labels: Bal Santa, gopi krishna dhungana, Jagat Guru